Voice of Somalis In Exile – Page 2
Aasaasaha barta Wikileaks, Julian Assange oo xabsiga ku dhex guursaday:
(WAR) Arbaco, 23/03/2022-London: Julian Assange oo ah asaasaha bartii siraha kashifi jirtay ee WikiLeaks, ayaa guurkiisu ka dhex dhacay, xabsi ku yaalla Koofur-Bari London, wuxuuna xarigga ku xirtay saaxiibadiisa mudada dheerey ay wada joogeen, ee Stella Moris. Stella ayaa tagtay jeelka Belmarsh ee uu ku xiran yahay Julian Assange, iyadoo […]
Sicir baraarka UK oo garay halkii ugu sareysay muddo 30 sanadood ah:
(WAR) Arbaco 23/03/2022-UK-Siricka oo cirka isku shareeray gudaha UK, ayaa ka dhigeysa nolosha dadweynaha mid adag. Bal qabsoo bishii hore ayaa sicir-bararku gaadhay 6.2 boqolkiiba, halka ay cirka isku shareereen cunnada, Shidaalka, kirada guryaha iyo wixii quutul-daruuri ah oo dhan. Dowladda ayaa iyaduna dhankeeda kordhisay canshuurta ay ka jareyso dadka […]
Sheekhii Soomaaliland baadigoobeysay oo Al-Shabaab iska dhiibay:
(WAR)-Isniin 21/03/2022-Somaliya- Sheekh Aadan Cabdiraxmaan Warsame oo loo yaqaan “Sheekh Aadan Sunne”, ayaa xaqiijiyey in uu Xarrakadda Al-Shabaab ku biiray. Sheekh Aadan Sunne oo dhowaan ka soo baxsaday magaaladda Hargeysa ee Xukuummadda Soomaaliland, ayaa BBC-da Laanteeda Af-ka Soomaaliga u sheegay, in isagoo Ehelkiisii oo dhan ay la socdaan, uu ku […]
Khudbadda madaxweyne Deni ee shaacinta musharxnimadiisa:
Madaxweynaha Buntiland oo ku dhawaaqay musharaxnimadiisa madaxweynaha Soomaaliya:
(WAR)-Sabti 19/03/2022-Garoowe,Soomaaliya- Madaxweynaha dowlad-goboleedka Buntiland Saciid Cabdullaahi Deni, ayaa si rasmi ah u shaaciyey in uu yahay musharax u taagan tartanka xilka madaxweynaha Soomaaliya oo dhowaan la qaban doono. Madaxweyne Siciid Deni, ayaa qudbad kooban oo uu ka jeediyey aqalka madaxtooyada Buntiland ee Garoowe, ku sheegay in uu si rasmi […]
Sacuudi Careebiya oo quusisay Britian:
(WAR)-19/03/2022-Sabti-Dowladda Boqortooyada Sacuudi Careebiya ayaa ku gacan-seydhay, codsi ay ka codsatay dowladda Britian oo ku aaddan in Sacuudigu Kordhiyo Shidaalka uu ka iibiyo Britian. Raisulwasaare Boris Johnson, oo booqasho ujeedadeedu tahay, in heshiiskii hore ee dhinaca shidaal kala iibsiga ee u dhaxeeyey, United Kingdom iyo Boqortooyada Sacuudi Careebiya wax laga […]
(WAR)-Talaado, March 15, 2022-Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa furka ku tuuray Garmalka, caradiisana uga jawaabay in uu hakiyo qul-qulka gaaska ee dhuumaha daanta Galbeed ee Garmalka. Dhuunta gaaska ee uu xiray ayaa dhirirkeedu yahay 2.500 oo mile taasoo isku xidha Ruushka, Booland iyo Jarmalka deetana waxeey us ii gudubtaa Belarus. […]
Agaasimiha Filimka caan baxay ee Black Panther oo la xiray:
(WAR)-Khamiis-10/03/2022-Agaasimaha filimka laga daba-dhacay ee Black Panther Ryan Coogler, ayaa la xiray ka dib markii markii gabar khasnaji ka ah Bangi ay ku qaladay qof bangiga inuu dhaco u dan leh. Isfaham’waa iyo si qaldan wax-u-qaadasho ayaa gabadha lacag hayaha ah ku xambaartay, in eey booliska iyo ilaalada bangiga hoosta […]
USA oo xannibaad ku soo rogtay qaar Ka mid ah madaxda Soomaaliya:
(WAR)26/02/2022-Sabti-Washinton,USA War hor-dhac ah oo ay soo hormarisay dowladda Mareykanku, ayeey ku sheegtay in eey xannibaado dhinaca saffarada ah dul-dhigeyso, qaar Ka mid ah madaxda Soomaaliya, shaqsiyaadkaan ayuu Mareykanku u arkaa, in eey qas ku hayaan, hannaanka geedisocodka nabadda, diimoqraadiyadda iyo xassilloonida Soomaaliya. Liiska ay ku qoran yihiin shaqsiyaadkaan ayaanse […]